छोटकरीमा : यस हप्ता (कार्तिक ०९ गतेदेखि कार्तिक १६ गतेसम्म)
दशैं केन्द्रित भएर बढ्दो कोरोना भाइरस प्रभाव नियन्त्रणका लागि सरकारले के-कस्ता कदमहरू चाल्यो ? यस अवधिभर कोरोना भाइरस संक्रमणको रेखा कति थपघट भयो ? यस हप्ताभर मुलुकभर के-कस्ता राजनीतिक, आर्थिक,न्यायीक एवं शैक्षिक गतिविधिहरू भए ? एकसाथ एकैठाउँमा सम्पूर्ण खबरहरू पढ्नुहोस्।
कार्तिक १६ गतेसम्म ९६० जनाको कोरोना भाइरसको कारण मृत्यु भएको छ ।
कार्तिक १६ गतेसम्म १,३४,८४२ जना कोरोना भाइरस संक्रमित निको भएका छन्।
यस्तै, हालसम्म १४,५६,३६६ जनाको पिसीआर टेस्ट भएको छ भने २,३८६ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्।
Coronavirus Update (Live): 46,593,163 Cases and 1,202,895 Deaths from COVID-19 Virus Pandemic - Worldometer
नेपाल-चीनबीचको प्रमुख व्यापारिक तातोपानी नाका औपचारिक रुपमा बुधबारदेखि पुनः सञ्‍चालनमा आएको छ । बाढीपहिराले तीन महिनादेखि बन्द भई गत असोज १९ गते सञ्‍चालनमा आएकामा केही नेपाली कर्मचारीमा कोभिड—१९ संक्रमण देखा परेको जनाई चिनियाँ पक्षले असोज २० गतेदेखि नाका बन्द गरेको थियो ।
रासायनिक मलको अभाव भए पनि पर्याप्त मनसुनी वर्षा र धान खेती गर्ने जमिन बढेकाले यस वर्ष धानको उत्पादन गत वर्षकै हाराहारीमा हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा १४ लाख ५८ हजार हेक्टरमा धान खेती गरिएको थियो। यो वर्ष ४८ हजार हेक्टर बढी जमिनमा धान खेती गरिएको केसीले बताए।
यस वर्ष धान उत्पादन 'गत वर्षकै हाराहारी' - BBC News नेपाली
कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि बन्द पशुपतिनाथको मन्दिर सुनसान भएको छ । लामो समयदेखि पशुपतिनाथको मन्दिर बन्द हुँदा मन्दिर क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै आएकाहरु विचल्लीमा परेका छन् ।
मन्दिर क्षेत्रका थोरै पसल खुला भएका छन् भने धेरैजसो पसलहरु व्यापार नहुँदा बन्द भएका छन् ।
कोरोना महामारीमा सुनसान पशुपतिनाथ (फोटो फिचर)
स्थायी कमिटी बैठकयता नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नियमितजसो बालुवाटार धाउँथे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र पार्टी एकताका बाँकी काम टुङ्ग्याउने सन्दर्भमा घण्टौँ कुराकानी हुन्थ्यो । र, पनि कुनै निकास निस्कँदैनथ्यो ।
प्रधानमन्त्री ओली भेट्न दिनहुँ बालुवाटार धाइरहेको देखेर कतिपयले अध्यक्ष प्रचण्डलाई ‘तारेख धाएको’ टिप्पणी पनि गरे । तर, अहिले ओली–प्रचण्डको भेटमा ‘ब्रेक’ लागेको छ ।
ओली–प्रचण्डबीच संवाद हुनै छाड्यो
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नियमित प्रेस ब्रिफिङ साताको दुई दिनमात्रै हुने भएको छ। अब सातामा आइतबार र बुधबार साविककै समयमा प्रेस ब्रिफिङ हुनेछ भने अन्य दिन ४:३० बजे मन्त्रालयको वेबसाइट, भाइबर, फेसबुक र ट्विटरमार्फत तथ्यांक अपलोड गरिनेछ।
चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल मनोरञ्जन क्षेत्र खुलाउने विषयमा बोर्डले पहल गरिरहेको बताउँछन् । केही समयअघि निर्माता संघ, कलाकार संघ, विकास बोर्डले हल खुलाउनेबारे सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । तर, निर्णय आइसकेको छैन । तर, कोरोना पर्वाह नगरी निर्माता–निर्देशक आफ्ना चलचित्र सुटिङ गर्न कस्सिएका छन्।
कोरोना संकटबीच धमाधम फिल्म सुटिङ
वाग्मती प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईलाई कोभिड–१९ को सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । उनले मंगलबार पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएको बताए । उनी प्रदेश प्रमुखको कार्यालय हेटौडाबाट दसैंमा झापाको मेचीनगरस्थित घर आएका थिए ।
तत्कालीन राजप्रसाद सेवाका पूर्व प्रमुखसचिव रेवतीरमण खनालको ८८ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । कानुन क्षेत्रका ज्ञाता एवं साहित्यकार खनालको मंगलबार साँझ काठमाडौँ महानगरपालिका–१३ कालीमाटीस्थित निवासमा निधन भएको खनालका आफन्त सुरज खनालले जानकारी दिए ।
म्याग्दीस्थित बेनी नगरपालिका क्षेत्रमा एक साता पुन: लकडाउन गरिएको छ । जिल्ला सदरमुकाम बेनीका एक प्रतिष्ठित घरनाका ८० वर्षीय वृद्धको दसैंकै बीचमा बिहीबार कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएपछि लकडाउन गरिएको हो ।
बेनीमा फेरि एक हप्ता लकडाउन
संघीय संसद्का समितिहरूले दिएका निर्देशन सरकारी तहमा कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिएको छ । कोभिड– १९ पछिको अवस्थामा विभिन्न समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका निकायलाई दिएको निर्देशन सरकारले पालना नगरेको पाइएको छ ।
समितिले जनताको पिसिआर परीक्षण, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, उपकरण, अत्यावश्यक औषधि, नियमित स्वास्थ्य जाँच उपचारलगायतका विषयमा दिएको निर्देशन पनि सरकारले पालना नगरेको पाइएको हो ।
संसदीय समितिका निर्देशन कार्यान्वयनमा समस्या
म्याग्दीको सरमुकाम बेनी आउँदै गरेको जिप दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने १० जना घाइते भएका छन् । प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा गम्भीर घाइते अन्नपूर्ण गाउँपालिका, २ भुरुङकी अन्दाजी १० वर्षीया रिया विकको उपचारका क्रममा बेनी अस्पतालमा मृत्यु भएको हो ।
प्रदेश सरकारलाई संघको प्रशासनिक युनिट मात्र भएको भनेर टिप्पणी गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयता कार्यान्वयनमा अत्यावश्यक कानुनहरू निर्माणमा समेत बेवास्ता गर्दै आएका छन् । प्रहरीसम्बन्धी कानुनहरू लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषदमा थन्किएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदमा दरबन्दी प्रतिवेदन रोकियो, प्रहरीको बढुवादेखि समायोजनसम्म अल्झियो
बाबुले छोराको चौरासी पूजा गरेको दृश्य विरलै देख्न पाइन्छ । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) मा एक बुबाले छोराको चौरासी पूजा गराएका छन् ।
सुनवल नगरपालिका– १२ हरकट्टाका १०८ वर्षीय केशवराज ज्ञवालीले आफ्ना जेठा छोरा दधिरामको आज चौरासी पूजा गराएका हुन् ।
यसवर्षको तिहार अधिकमासका कारण झण्डै एक महिना पछाडि धकेलिएको छ । तिहारमा सयपत्री तथा मखमली फूलको मालाको खपत हुने गर्छ । तर यसवर्ष तिहार अगाडि नै सयपत्री फूल फुलिसक्ने भएकाले मागअनुसार फूल आपूर्ति हुन नसक्दा बजार प्रभावित हुने देखिएको छ ।
तर व्यवसायीहरुले भने तिहारमा स्वदेशी उत्पादनले नै फूलको माग धान्ने बताएका छन् ।
यस वर्षको तिहारमा स्वदेशी फूलले नै बजारको माग धान्छ : व्यवसायी
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका चार खेलाडी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले बिहीबारदेखि प्रशिक्षणमा बोलाइएका ३४ खेलाडीमध्ये चार जना कोरोनाबाट संक्रमित भएको जनाएको छ ।
कलाकार सुशीला दाहालको ६७ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । पछिल्लो वर्षयता अमेरिका बस्दै आएकी उनको क्यान्सरको कारण‍ बिहीबार 'बस्टन'मा निधन भएको कलाकार हरिवंश आचार्यले बताए । 'मह जोडी'सँग उनले चर्चित टेलीश्रृंखला 'लालपूर्जा', 'चिरञ्‍जीवी', 'भकुन्डे भुत' लगायतमा अभिनय गरेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा विभाजन हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । सचिवालयका केही सदस्यसहित आफू निकट नेताहरुसँग खुमलटारमा छलफल गरेका नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीबाट यस्तो चेतावनी आएको बताएका हुन् ।
नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले फुट र फुटजन्य क्रियाकलाप राष्ट्र एवं कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकता, आमकार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूको चाहना र जनादेशविरुद्ध हुने बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै पार्टी एकताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन र आ–आफ्नो ठाउँबाट एकताको रक्षाका निम्ति सक्रिय पहल गर्न आह्वान गरेका छन् ।
देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीको चाहना पूरा गर्ने कार्य कसैबाट नहोस्, समयमै सोचौँ : नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठ
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोनाबाट निधन भएकाको यकिन संख्या पत्ता लगाउन तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेकाे तथ्यांकमा आइतबारसम्म काेराेना संक्रमणबाट नाै सय ६० जनाकाे निधन भएकाे छ
कोरोनाबाट कतिजनाको निधन भयो भन्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय नै अनभिज्ञ, निधन हुनेकाे यकिन संख्या पत्ता लगाउन समिति गठन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले न्यायालयको फैसला अवज्ञा गरेको आरोपमा ‘अदालतको अवहेलना’को मुद्दा सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।
कोरोना संक्रमणको शंकामा परीक्षण र संक्रमण भएमा उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला उल्लंघन गरेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता भएको हो ।
सरकारले कोभिड–१९ को लक्षित वर्गबाहेक अरूको उपचार खर्च लाग्ने भएपछि टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले उपचार खर्च तोकेको छ ।
पहिले निःशुल्क गर्दै आएको अस्पतालले कोभिड–१९ का सङ्क्रमितलाई उपचार गर्नका लागि उपचार खर्च तोकेको हो । अस्पतालका निर्देशक डा सागरराज भण्डारीले सरकारले नै उपचार खर्च नदिएपछि संस्था चलाउनका लागि सङ्क्रमितको लागि उपचार खर्च तोकिएको बताए ।